Howlgal hubka dhigis ah oo ka dhacay Boosaaso | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgal hubka dhigis ah oo ka dhacay Boosaaso
Boosaaso ayaa waxaa ka dhaca inta badan weeraro ay ka dambeeyaan Al-Shabaab iyo Daacish oo saldhigyo ku leh buuraha Golis iyo Galgala, oo aan magaaladda ka fogeyn.
BOOSAASO, Soomaaliya - Ciidamada Maamulka Puntland ayaa xalay howlgallo ballaaran ka sameeyay magaaladda Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari kadib markii ay kusoo kordheen falalka amni darro.
Qoraal ka soo baxay Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Bari ayaa lagu sheegay in ujeedka howlgallada ay ahaayeen xaqiijinta amniga, waxaana ay Ciidanka qabteen hub si sharci darro ah loogu dhex haystay magaaladda.
Ciidamada ayaa intii ay howlgallada ku guda jireen gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ka fiiqayeen muraayadaha macda madow ee Beesalka, oo horey looga mamnuucay degaanada Puntland.
Boosaaso ayaa lagu wadaa in dhawaan lagu qabto doorashadda Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, oo Maamul goboleed kasta labo magaallo oo kamid ah lagu qabanayo, sida uu dhigayo heshiiskii doorashadda ay Farmaajo iyo Madax Goboleedyada ku gaareen 17-kii September magaaladda Muqdisho.
0 Comments Topics: al-shabaab boosaaso doorashadda 2020 puntland